यी राशीका मानिसले कमाउँछन् मनग्य सम्पति, सम्पति कमाउन यत्ती १ काम गर्नुहोस् — Imandarmedia.com
काठमाडौ। विशेषगरी ४ राशी हुने मानिसले निकै धन कमाउने तथ्य धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरु धनकमाउनकै लागि जन्मिएको हुने धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ ।
१) वृष – धनको सम्बन्ध दोस्रो र आठौं स्थानमा रहेका राशीसँग जोडिएको हुन्छ । यही भएर दोस्रो स्थानमा रहेको वृष राशी हुने मानिसले धन कमाउने योग बढी हुने गर्छ । वृष राशीको गुरू शुक्र भएका कारण पनि यो राशी हुने मानिसहरू आकर्षक र महंगा सामान किन्न सौखिन हुन्छन् ।
वृष राशी हुने मानिसहरू औसत वस्तुलाई त्यति मन पराउँदैनन् । शुक्र ग्रहलाई धन, विलासिता, तथा मोजमस्तीको सूचक पनि मानिन्छ । र यही कारण उनीहरू धन कमाउन निकै मेहेनत गर्ने र कमाउने अवसर खोज्ने गर्छन् ।
यो राशी हुने मानिसले परिश्रमको महत्व बुझ्नुका साथै मोजमस्ती पनि गर्छन् । साथै वृष राशी हुनेहरू निकै जिद्दी गर्ने र आफूले चाहेको कुरालाई पाएर नै छोड्ने प्रयास गर्छन् ।
२) वृश्चिक – वृश्चिक राशी हुने व्यक्तिले भौतिक वस्तुप्रति बढी आशक्ति देखाउँछन् । महंगा सवारी साधन, महल, तथा वस्तुले यी मानिसलाई सधैं आकर्षित गरेका हुन्छन् । वृश्चिक राशी हुने मानिसहरू कुशल व्यापारी हुन्छन् । जीवन तथा संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अरूको भन्दा फरक हुने गर्छ ।
३) कर्कट–कर्कट राशी हुने व्यत्तिहरू सधैं राम्रो अवसरको खोजीमा हुन्छन् । बढी भावुक हुने भएकाले आफन्त र परिवारलाई कसरी सुखी राख्ने भनेर सोचिरहेका हुन्छन् । परिवारको इच्छालाई कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा नै यी मानिसले बढी ध्यान दिएका हुन्छन् । यही गुणले गर्दा नै उनीहरू बढी मेहेनती हुने र आफ्नो सपनालाई पूरा गरेर छाड्छन् ।
४) सिंह–सिंह राशी हुने मानिसले आफूलाई अरूभन्दा फरक बनाउन खोज्छन् । अरू मानिसले आफूलाई ध्यान देऊन्, आफ्नो प्रशंसा गरून् र आफूलाई आदर्श मानून् भन्ने चाहना हुन्छ । यही भएर आफूसँग भएको क्षमता र गुण प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । नेतृत्व गर्ने विशेष क्षमता भएका यी मानिससँग ठूल्ठूला चाहना पनि हुन्छन् ।
महंगा सवारी साधनमा घुमफिर गर्न चाहने, महंगा मोबाइल प्रयोग गर्छन् । आफ्नो व्यक्तित्वले अरूको ध्यान तान्न खोज्छन् । यस्ता गुण भएका कारण नै उनीहरू धन कमाउन लालायित हुने गर्छन् र कमाउँछन् पनि । आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ ।
शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस् ।
मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा करौडौं शब्दहरू, हजारौं पुस्तकहरू, हजारौं लेखहरू पढि सकेका हुन्छन् तापनि सफल बन्न भने सकेका हुँदैनन् । किन यस्तो हुन्छ ? एकपटक यी तल उल्लेखित बानीहरूको अध्ययन गरी आफ्नो बानीलाई एकपटक अध्ययन गर्नुहोस्, आफ्नो बानी र तल उल्लेख गरिएका बानीहरूको बारेमा के फरक छ ?
यसको विश्लेषण गरी आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस् । यसबाट गहिरो प्रेरणा, बुद्धि र अन्तरदृष्टिलाई सुधार गर्न मद्दत गर्छ । निम्न बानीहरू दैनिक भवनमा अझ समर्थनात्मक र व्यावहारिक हुन्छन् जसले संसार जित्न सजिलो हुन्छ ?
१) जहाँ अरूले केही देख्दैनन तिनीहरू खोज्छन् र अवसरहरू पाउँछन्, २) अन्य व्यक्तिहरूले समस्या नै समस्या मात्र देख्छन् तर उनीहरू अवसरै अवसर मात्र देख्छन् । ३) हरेक समस्याको समाधानमा मात्र केन्द्रित हुन्छन् । ४) संचततापूर्वक र विधिपूर्वक आफ्नो सफलता सिर्जना गर्छन् तर आस गरेर
५) अरूझै सरल देखिन्छन तर काम भने विशिष्ट र उत्कृष्ट गर्छन् । ६) एउटा उत्पादनशील, सिर्जनात्मक र सकारात्मक प्रश्नहरूमात्र गर्छन्, ७) बिरलै सिकायत (शक्तिको बर्बादी) गर्छन्, ८) अरूलाई दोष लगाउदैनन्, आफूले गरेका कार्यहरू र परिणामका लागि पूर्ण जिम्मेवारी आफै लिन्छन् । ९) सम्भावनालाई सधैं अगाडि बढाउने र अझ प्रभावकारी तरिकाले प्रयोग गर्ने चाहना गर्छन् ।
१०) सधैं व्यस्त हुन्छन्, उत्पादनशील र क्रियाशील योजनामा व्यस्त हुन्छन्, ११) आफ्नो टिमको एउटा हिस्सा म पनि हुँ भन्ने बुझदछन् र जित जितको सम्बन्ध सिर्जना गर्दछन् १२) बढी महत्वकाँक्षी हुन्छन्, कल्पना गर्न चाहन्छन्, सबैभन्दा राम्रो जीवन बाँच्न चाहान्छन् । त्यसैगरी उच्च जीवन बिताउँछन् । १३) स्पष्ट र निश्चित दृष्टिकोण हुन्छ कि जीवनका लागि के तिनीहरू चाहन्छन वा चाहदैनन् ।
१४) नक्कल गर्नभन्दा अन्वेषण गर्न रुचाउँछन्, १५) अन्य व्यक्तिलाई पर्खेर आफ्नो समय खेर फाल्दैनन्, १६) जीवनभर नै सिकारूहरू बनिरहन्छन र सधैं नयाँ विचारमा तल्लीन हुन चाहन्छन् १७) असल चिज पत्ता लगाउन सक्ने क्षमता हुन्छ १८) आफ्नो जीवनलाई नै रोक्दै र सूरू गर्दै जीवन बिताउन चाहँदैनन्, १९) आर्थिक, सम्वेगात्मक, व्यवसायिक र मनोवैज्ञानिक कुराहरूमा जोखिम लिन तयार हुन्छन् २०) समस्याहरू र चुनौतीहरूसँग चाँडो र प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गर्दछन् ।
२१) आफ्नै सबभन्दा राम्रो जीवन सक्रियरूपले र सचेततापूर्वक सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध गर्छन २२) सक्रिय मात्र होइन पुनः सक्रिय भएर आफ्नो काम पुरा गर्दछन् २३) व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी २४) सचेततापूर्वक सञ्चार गर्दछन् गर्दछन २५) जीवन एउटा सफल योजनाबद्ध घटना र परिणामको संयोग हो भन्ने ठान्छन्, २६) सफल मानिसहरूले गर्ने निर्णय अन्य मानिसहरूले गर्न जान्दैनन् र गर्दैनन्, २७) सफल मानिसहरूले कामको मूल्य र फाइदा स्पष्ट बभm्दछन् ।
२८) आफ्नो मूल मर्म पहिचान गरेका हुन्छन २९) सन्तुलनमा काम गर्ने क्षमता हन्छ, ३०) अनुशासन, आत्म नियन्त्रण र शक्तिको महत्व बभदछन ३१) हरेक समय सुरक्षित हुन्छन् । ३२) दयालु र दानी हुन्छन् र अरूलाई सहयोग गर्दा उनीहरू आनन्द लिन्छन् ३३) नयाँ अपरिचित साथीहरूलाई आदर गर्दछन्, ३४) सरल हुन्छन् र गल्ती स्वीकार गर्न र माफी माग्न अप्ठयारो र लाज मान्दैनन्। ३५) आफ्नो शरीरको हेरचाह गर्न सबल .हुन्छन् ।
३६) बलियो इन्जिन भएकाले कडा कार्य गर्छन् र अल्छी हुँदैनन्, ३७) लचकदार हुन्छन् ३८) खुल्ला हुन्छन् र पृष्ठपोषण गर्न र सुन्न मन पराउँछन् ३९) अल्छी मनिससित अल्मलिदैनन् ४०) आफ्नो शक्तिलाई नियन्त्रण बाहिर राख्दैनन् ४१) आफ्नो मानिस खुसी पार्नेभन्दा पनि पेसागत काममा ध्यान दिन्छन्, ४२) आफ्नै कम्पनीमा काम गर्न आनन्द मान्छन् ४३) वचनबद्धता र प्रतिबद्धता हुन्छन् जुन काम गर्ने शक्ति र क्षमता प्रदर्शन गर्दछन्, ४४) असफलतबाट डराउँदैनन् ।
४५। खुसी र आनन्द लिन जान्दछन् ४६) जीवनवृत्ति परिचय र पहिचान होइन, कर्म हो भन्ने सोच गर्दछन् ४७) प्रभावकारिता र सङ्क्षिप्ततामा चाख राख्छन् ४८) जति सुरू गर्छन्, त्यसलाई समाप्त पनि गर्छन् ४९) बहुआयामिक हुन्छन् ५०) सिद्धान्तका बारेमा कुरा गर्दैनन्, वास्तविकतामा बाँच्छन् र रमाउँछन्।